Salesmachine: Ampitomboy ny fiovam-po amin'ny SaaS sy ny fananganana mpanjifa | Martech Zone
Raha mivarotra a Software toy ny Service Vokatra (SaaS), ny fidiram-bolanao dia miankina amin'ny fampiakarana ny angon-drakitra sy ny fampiasana ny vokatra eo amin'ny sehatry ny fifandraisana sy ny kaonty. Salesmachine manome hery ny ekipa mpivarotra sy fahombiazana amin'ny fahitana azo ampiharina sy mandeha ho azy hampitombo ny fiovam-po sy ny fananganana mpanjifa.
Salesmachine dia manana tombony roa
Hamafiso ny fiovam-po - Fanapahana isa azo ekena mifototra amin'ny fahafahan'ny mpanjifa sy ny fananganana vokatra. Ny mari-pahaizana fitsapana Salesmachine dia mamela ny ekipan'ny varotrao hifantoka amin'ny fitarihana avo lenta ary hanakatona fifanarahana tsara kokoa amin'ny ezaka kely kokoa.
Ampitomboy ny fananganana sy fitanana ny mpanjifa - Mandrindra hetsika mavitrika mba hanomezana fahombiazana amin'ny dian'ny mpanjifa iray manontolo. Salesmachine dia manampy anao hitondra fahombiazana amin'ny dingana tsirairay amin'ny dia ataon'ny mpanjifa ary hifandray amin'ny mpanjifa rehefa voamarika ny loza mety hitranga.
Ahoana ny fomba hampitomboan'ny Salesmachine ny fiovam-po
Score Fit Customer - Isaky ny fisoratana anarana vaovao, ny Salesmachine dia manisa isa azon'ny mpanjifa mifototra amin'ny demografika sy ny fampahalalana momba ny orinasa.
Isa fananganana vokatra - Fandraisana ny vokatra azo avy amin'ny kaonty sy ny fihetsiky ny mpampiasa, ny fampiasa matetika, ny fampidirana ny endri-javatra, ny NPS ary ireo famantarana maro hafa.
Fahafantarana fitsapana - Atambatra ny isa azon'ny Mpanjifa sy ny naoty fananganana vokatra hahalalana ny vokatra mitarika vokatra (PQL).
Fampandrenesana momba ny hetsika - Ampahafantaro ny ekipanao amin'ny varotra ao amin'ny CRM, Email na Slack rehefa tsikaritra ny fitsarana vaovao mahafeno fepetra.
Fihetsiketsehana mandeha ho azy - Mampiroborobo ny fandraisana anjaran'ny vokatra ho an'ny mpanjifa ambany fananganana, miaraka amin'ny filaharana an-tserasera ary ny mailaka fanabeazana asongadiny.
Tatitra momba ny fananganan-jaza - Araho, refeso, fakafakao ny isa sy ny fiovam-po hanatsarana ny marina sy ny fahombiazany.
Ahoana no hampitomboan'ny Salesmachine ny fananganana mpanjifa
Scoring fahasalamana - Salesmachine dia manisa ny fahasalaman'ny mpanjifanao mifototra amin'ny fihetsik'izy ireo. Azonao atao ny mandray anjara azy ireo mavitrika rehefa misy risika na fotoana iray hitanao manerana ny dian'ny mpanjifa iray manontolo.
Fampandrenesana loza - Salesmachine dia tafiditra ao amin'ny Slack, Email, ary fitaovana hafa hampandre ny mpampiasa azy rehefa tsy salama na misy fiovana ratsy.
Fitantanana ny androm-piainan'ny mpanjifa - Ny mpanjifa amin'ny dingana Onboarding lifecycle dia tsy tokony hoentina amin'ny fomba mitovy amin'ny mpanjifa amin'ny dingana fiainana Renewal. Salesmachine dia ahafahanao manangona mpanjifa amin'ny dingana samihafa amin'ny dian'ny mpanjifa.
Playbooks - Rehefa tsikaritra ny fahaiza-mitarika vaovao mahay, Salesmachine dia afaka mandefa mailaka ho azy, mamorona asa ao amin'ny CRM anao, mandefa fampandrenesana anao. Ny mpanampy anao manokana no mameno ny kalandrie sy ny boaty misy anao miaraka amin'ny fitarihana mety hanidy.
Fihetsiketsehana mandeha ho azy - Salesmachine dia sehatra misokatra, mamorona hetsika amin'ny serivisy antoko fahatelo toa ny Salesforce, Hubspot, Pipedrive, Intercom handrindrana ny hetsika eo amin'ireo ekipa samihafa mifanerasera amin'ny mpanjifanao.
360 Degree View an'ny mpanjifa - Makà fomba fijery feno momba ny mpanjifanao. Amboary amin'ny toerana iray ny Intercom rehetra, Resadresaka mailaka, tapakila fanohanana, isa NPS.
Tatitry ny fananganana mpanjifa - Asehoy ny hasarobidin'ny asanao. Mandrefy ny tena fiantraikan'ny paikadin'ny Salesmachine amin'ny vola miditra, ny fahasalaman'ny mpanjifa, ny churn, ary maro hafa.
Mangataha Demo Salesmachine
Tags: fananganana mpanjifafitazonana ny mpanjifaFinaritraGmailtelefaoninaautomation marketingOlarkfampandrenesana fanavaozanasaassalesforcesalesmachineampahanyStatisMeterStripfananganana ny fitsaranazapierzendesk